မြန်မာ, 03 ဇူလိုင် 2017
3 ဇူလိုင် 2017 တနင်္လာ
UNHCR ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ ကုသလမဂ္ဂ မဟာမင်းကြီး Filippo Grandi ဟာ မနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ကစလို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို သုံးရက်ကြာ ရောက်ရှိနေပါတယ် သူဟာ ရခိုင်၊ ကချင်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာ အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခတွေကြောင့် အိုးအိမ် စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေကြ ရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ အရေး ကိုယ်တိုင် သွားရောက်လေ့လာပြီး ဖြေရှင်းကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့အတွက် ခုလို မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံထဲက သောင်းနဲ့ချီတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို ပြန်နေကြပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ သတင်းပတ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမား ခြောက်သောင်းလောက်ပြန်သွားတဲ့အကြောင်း ထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး တာဝန်ရှိသူတွေက တနင်္လာနေ့မှာပြောပါတယ်။
လက်ရှိ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ NCA လမ်းကြောင်းနဲ့ လွှဲချော်နေတယ်လို့ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ် NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ အဖွဲ့တွေက ဝေဖန်လိုက်ပါတယ် NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ အဖွဲ့ ရှစ်ဖွဲ့ဟာ လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ပြန်လည် သုံးသပ်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြပြီးနောက် အခုလို ဝေဖန်ချက်ထွက်လာတာပါ။
သတင်းအကျဉ်းချုပ် ၀၇. ၀၃. ၂၀၁၇
ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖော်ဆောင်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ လွတ်လပ်စွာ သတင်းရယူနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ပတ်ဝန်းကျင်တခု ရှိဖို့ အရေးကြီးသလို၊ လတ်တလော သတင်း မီဒီယာသမားတွေ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတာ၊ တရားစွဲဆို ခံရတာတွေ ဆက်ပြီး ရှိနေတာဟာ စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်တယ်လို့ ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် လူ့အခွင့်ရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ် နေတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ စုံစမ်း စစ်ဆေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီက စေလွတ်မယ့် အချက်အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကို မြန်မာနိုင်ငံ လာရောက်ခွင့် ပြုမှာ မဟုတ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တာကြောင့် မြန်မာအစိုးရအပေါ် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်လို့ မလေးရှား ဒုတိယ ၀န်ကြီးချုပ် Ahmad Zahid Hamidi က ပြောကြောင်း မလေးရှားနိုင်ငံက The Straits Times သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။